Qalbi-dhagax oo shaaciyay cidda leh mas'uuliyadda dhiibistiisii - Awdinle Online
Qalbi-dhagax oo shaaciyay cidda leh mas’uuliyadda dhiibistiisii
C/kariin Muuse Qalbi Dhagax ayaa sheegay in mas’uuliyadda koowaad xarigiisa ay fuuleyso Madaxweyne Farmaajo oo ah Madaxweynaha ummaddaan dooratay, halka intii kale ee qeybta ka aheyd ay ahaayeen kuwo digreeto Madaxweyne lagu magacaabay.
C/kariin Qalbi Dhagax ayaa sheegay inay fiicnaan laheyd Xasan Cali Kheyre wixii uu ku leeyahay iyo qeybtii uu ku lahaa dhiibdidiisa inuu u sheego shacabka Soomaaliyeed.
“Dambi kasta oo dhacay qeybta koowaad ama mas’uuliyadda koowaad waxaa is ka leh Madaxweynaha ummaddaan dooratay, dadka intiisa kale digreeto Madaxweyne lagu soo magacaabayay oo Baarlamaanka lagu geynayay, Mas’uuliyadda koowaad waxay fuuleysa oo lagala xisaabtami oo is ka leh Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo”ayuu yiri C/kariin Qalbi Dhagax.
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa Baraha Bulshada wareegayay hadallo ku aadan in Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ahna musharax Madaxweyne uu raaligelin ka bixiyo kaalintii uu ku lahaa dhiibistii Qalbi-dhagax ,hayeeshee uusan weli ka jawaab.
Previous articleDaahir Geelle ” Khatar ayaa kusoo wajahan Dimuqraadiyadda Curdunka ah ee Soomaaliya”
Next articleXasan Sheekh oo weerar afka ah ku qaaday Taliyaha NISA